यसरी तोडेका थिए भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनको अहंकार ! - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com यसरी तोडेका थिए भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनको अहंकार ! - खबर प्रवाह
द्वापर युगमा अर्जुनलाई आफू श्रीकृष्णको परमभक्त भएको घमण्ड चढ्छ । त्यो थाहा पाएपछि अर्जुनको अहंकार तोड्न भगवान श्रीकृष्णले सँगै घुमाउन लग्नुहुन्छ ।
घुम्दै गर्दा एक सुकेको घाँस खाइरहेको एक गरीब ब्राह्मणमा नजर पुग्छ । उनको कम्मरमा तरवार झुण्डिरहेको हुन्छ ।
अर्जुनले उनलाई सोध्छन्, ‘तपाईं त अहिंस्रक ब्राह्मण हुनुहुन्छ । जीव हिंसा होला भनेर सुकेको घाँस खाएर बाँचिरहनुभएको छ । तर हिंसाको उपकरण तरवार किन लिनुभएको त ?’
गरीब ब्राह्मण जवाफ दिन्छन्, ‘म केही मानिसलाई दण्ड दिन चाहन्छु ।’
अर्जुनलाई आश्चर्य लाग्छ र सोध्छन्, ‘तपाईंका शत्रु को हुन् ?’
ब्राह्मण भन्छन्, ‘म चारजनालाई खोजिरहेको छु । पहिलो त म नारदलाई भेट्न चाहन्छु । उनी मेरा प्रभुलाई भजन कीर्तन गरेर सुत्नै दिँदैनन् । दोस्रो, म द्रौपदीप्रति क्रोधित छु । प्रभु खान बस्नै लाग्दा उनले पुकारिन् । प्रभुले भोजन छोडेर पाण्डवहरूलाई दुर्वासा ऋषिको सरापबाट बचाउन जानुपर्‍यो । अनि उनले प्रभुलाई जुठो खाना खुवाइन् ।’
अर्जुनले सोधे, ‘अनि तेस्रा शत्रु को हुन् ?’
‘उनी हुन् हृदयहीन प्रह्लाद । उनले मेरा प्रभुलाई खम्बाबाट प्रकट हुन बाध्य बनाए ।’
‘चौथा शत्रु हुन् अर्जुन । उनले भगवानलाई युद्धमा आफ्नो सारथी बनाए । भगवानको असुविधालाई उनले ध्यान दिएनन् । प्रभुलाई कति कष्ट भयो होला ?’
यति भन्दै गर्दा गरीब ब्राह्मणको आँखाबाट आँसु निस्कियो ।
यो सब सुनेपछि अर्जुनको अहंकार चकनाचुर हुन्छ ।
उनले श्रीकृष्णतर्फ फर्केर भने, ‘म नै तपाईंको परमभक्त हुँ भन्ने घमण्ड थियो । तर संसारमा तपाईंका अनन्य भक्तहरू थुप्रै छन् । म त केही पनि होइन रहेछु ।’
कुन राशिले कुन समयमा सवारी खरिद गर्ने ? राशि अनुसारको टिप्स
दैनिक जीवनमा आजकल सवारी साधनको निकै महत्व हुने गर्दछ । सवारी साधन बिना कामकाजी ब्यक्तिलाई निकै कठिनाई हुने गर्दछ । सवारी साधनको सुख शुद्ध रूपमा शनि र शुक्रमा निर्भर हुन्छ । शनिको कृपा नभएका राशिका ब्यक्तिले सवारी खरिद गरेमा यसले अनावश्यक तनाव बढाउँछ । साथै सवारी साधनको सुखमा शुक्रको योगदान हुने भएकाले शुक्र सही भएको […]
सनातन धर्मको मान्यताअनुसार ३३ करोड देवी–देवता छन् । यी सबै देवी–देवताको पूजा एकसाथ गर्न सम्भव पनि छैन । त्यसैले हरेक बारको आफ्नै महत्व रहिआएको छ । यद्यपि, कुनै–कुनै दिनमा भने विशेष देवी–देवताको पूजाअर्चना गर्दा सांसारिक कामना पूरा हुने जनविश्वास छ । सप्ताहको सात दिनले पनि विशेष महत्व राख्दछ । हिन्दु धर्मले कुन दिन कुन देवी–देवताका […]
हिन्दू धर्मग्रन्थमा मानव जीवनलाई सहज बनाउन तथा नित्य कर्मका विषयमा जानकारी दिइएको पाइन्छ । जसअन्तर्गत आज हामीले गरुड पुराणमा भएका केही कुराहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं । गरुड पुराणमा मानिसले बिहान उठ्नासाथ निम्न ५ कुरामा ध्यान दिन सुझाएको पाइन्छ । गरुड पुराणमा एक श्लोक छ, जसमा मानिसले नित्य गर्नुपर्ने कामको बारेमा बताइएको छ । स्नानं […]
निरन्तर लागिरहने मानिसले जे ऊ चाहन्छ त्यो पाउन सक्छ : श्रीमद्भगवद गीता
गीतालाई हिन्दू धर्म दर्शनमा मात्र होइन विश्व व्यापीरुपमा विशेष महत्व दिइन्छ । महाभारत युद्धका क्रममा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिएको तत्व ज्ञान नै गीता हो । त्यसैले हिन्दू धर्मवालम्वीहरुका लागि गीताको विशेष महत्व रहन्छ । उनीहरु गीताको पाठ गर्ने मात्र नभइ श्रद्धा भक्तिका साथ पूजा आरधाना पनि गर्ने गर्दछन् । यहाँ गीताका अनमोल वचनहरु उल्लेख गरिएको […]
महिलाले सबेरै यी काम गरे चम्किन्छ भाग्य !
कोही व्यक्तिको कुण्डलीमा ग्रह सम्बन्धी केही दोष भएमा भाग्यले साथ दिँदैन । कुण्डलीको दोषाबाट टाढा रहनका लागि ज्योतिष शास्त्रमा कयौँ उपाय अपनाउन सकिने शास्त्रले बताएको छ । वर्ण कीर्ति मन्ति लक्ष्मी स्वास्थ्यमायुश्च विदन्ति । ब्राह्मो मुहूर्ते संजाग्रच्छि वा पंकज यथा ।। यो श्लोकअनुसार ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नाले व्यक्तिको सुन्दरता, धनलक्ष्मी, ज्ञान, स्वास्थ्य तथा लामो आयु प्राप्त […]
आफ्नो संकट टाढा गर्न राशि अनुसार मन्त्र जप्नुहोस्
प्राय मानिसहरु ज्योतिषीहरुका विभिन्न फलादेश र भविष्यवाणीलाई लिएर नासमझ बन्छन् । किनकी उनीहरुका लागि के उचित र के अनुचित छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । व्यक्तिले आफ्नो राशि अनुसार मन्त्रको जप गर्छ भने निश्चितरुपमा उसलाई सफलता मिल्ने ज्योतिष शास्त्रले बताउँछ । मन्त्रको दैनिक उच्चारण तथा जप गर्नाले उसका धेरै संकटहरु मुक्त हुने विश्वास राखिन्छ । आर्थिक रुपमा […]